ဝတ်လစ် စားလစ်ပုံ ပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းမှာ ချိုးဖောက်မှုကြီး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မင်းသမီး ဂျန်နီဖ? - Yangon Media Group
မင်းသမီးဂျန်နီဖာလောရန့်စ်၏ကိုယ် ပိုင်အကောင့်များ အဟက်ခံရပြီးနောက် ၎င်း၏ဓာတ်ပုံအချို့မှာ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပေါက်ကြားလာခဲ့သည်။ ပရိသတ်များသည် ၎င်း၏ ဝတ်လစ်စားလစ်ဓာတ်ပုံများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားရာတွင် ယင်းကိစ္စသည် မယုံကြည်နိုင်လောက်သောချိုးဖောက်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ “The Hunger Games” ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဂျန်နီဖာ၏ ကိုယ်ပိုင် Apple နှင့် iCloud အကောင့်တို့မှာ အဟက်ခံခဲ့ရပြီးနောက် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဓာတ်ပုံများပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကဲ့သို့သောချိုးဖောက်မှုကြီးများကို ဂျန်နီဖာလောရန့်စ်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် တစ်ကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့ရ ဖူးပြီး ယင်းကိစ္စရပ်များကြောင့် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဆုများပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသည့် မင်းသမီးက ”တစ်လောကလုံးရဲ့ တံတွေး ခွက်ထဲပက်လက်မျောသွားသလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အဟက်ခံရတဲ့ကိစ္စ ရပ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ စကားနဲ့တောင် ဖော်ပြလို့မရတဲ့ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု Hollywood Re- porter မီဒီယာကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသည့်အတွက် စိတ်ထဲတွင်ခံစားနေရကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စဖြစ်ပွားချိန်တွင် ၎င်း၏လုံခြုံရေးအ ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီး နာရီတိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံအသစ်တွေတင်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အကိုက်ခံရတဲ့ အခြေအနေအမျိုးကို စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတော်မတရားပြုကျင့်မှုနှင့် လိင်ခွဲ ခြားဆက်ဆံမှုတို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက ”ကျွန်မဖယ်ကြဉ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ တန်းတူညီမျှလည်း အနုပညာကြေးမရခဲ့ပါဘူး။ ဟက်ကာတစ်ယောက်ရဲ့ ဖောက်ထွင်းကျူးလွန်မှုကိုလည်းခံခဲ့ရ ပေမယ့် ဘယ်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အင်အားသုံး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုတော့ ကျွန်မ မခံခဲ့ရပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
'' Vent လုပ်လို့ ကိုယ့်ကို မုန်းသွားမယ်။ မင်းသမီးလုပ်လို့ ကိုယ့်ကို ချစ်သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အော?
အစိုးရနှင့် UNFC အဖွဲ့ဝင်များအကြား NCA ရေးထိုးရန် ဆွေးနွေးမှုရလဒ် ကောင်းမွန်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်
မြောင်းမြခရိုင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲသို့ မင်းသားဝေဠုကျော် တက်ရောက် ဖွင့်လ?